Abesifazane abaningi banesithakazelo kumbuzo walokho umuntu akufunayo kowesifazane ofuna ukuchitha konke ukuphila kwakhe. Abantu bajwayele, bahlangane futhi benze konke ukuthola ingxenye yabo yesibili. Kodwa yiziphi izimfanelo okufanele owesifazane afanele aziphathe ngayo kumuntu? Mhlawumbe kufanele kube umngane ozojabulela ukuzijabulisa nomuntu? Noma kufanele abe ngumthandi onothando? Mhlawumbe indoda ifuna umama ophelele izingane zakhe zesikhathi esizayo? Noma ingabe indoda ifuna owesifazane onamakhono afanayo nonina? Ngezansi izinto ezingu-10 amadoda azifunayo kumuntu wesifazane.
1. Owesifazane uhlala impilo ezimele futhi ujabule ngaso sonke isikhathi.
Ukuze owesifazane ongcono kubalulekile ukuba nesitayela sakho esiyingqayizivele, kufanele ngaso sonke isikhathi abe nesikhathi somndeni nabangane, futhi ukuzinakekela kwakhe kubalulekile. Ungumthandi we-adventure nokuhamba. Owesifazane ofanelekayo uyazi ukuthi angakujabulela kanjani ukuphila, kungakhathaliseki ukuthi kuyini - uhambe epaki, usuku olulodwa olusentshonalanga noma amaswidi okulungiselela ukudla.
Noma yimuphi umuntu amaphupho owesifazane ongazibeki njengomgomo wakhe ukufuna umkhwenyana, akabheki phambili umshado ophumelelayo, futhi akafuni umuntu ofanele ukuba aphile ngokugcwele
2. Owesifazane ongaba umngane omkhulu kakhulu womuntu.
Umthwalo wesifazane ongcono uhlanganisa ukusiza indoda ukuba ibe yiyo yonke into ephezulu: ukuzwakalisa ubuhle bakhe nokungaphumeleli, ukujabula ngempumelelo yakhe, ukuhleka lapho ehleka. Ephendula, indoda kufanele izame ukunikeza lo wesifazane izimpawu ezifanayo zokunakekelwa.
3. Owesifazane akufanele athathe izinyathelo zokuqala.
Ukuphikisana okuningi ngalesi sihloko, noma kunjalo, iningi labesilisa abaxoxwa nabo bayavuma ukuthi owesifazane othi ulungile akudingeki enze noma yini ukuze ajwayele indoda, ngoba ngamunye wabo ungumzingeli eshaweni, futhi unesithakazelo sokuwina. Futhi-ke owesifazane angaqiniseka ukuthi uyathandeka kumuntu.
4. Asikho isidingo sokubeka ingcindezi kumuntu.
Mhlawumbe, esinye sezici ezibaluleke kakhulu ebuhlotsheni phakathi kwabesifazane nabesilisa. Amadoda awabekezeleli ukucindezelwa nokuvinjelwa kwenkululeko kunoma yikuphi ukuboniswa. Akukhuthazwa ukumkhathaza ngezingcingo izikhathi eziyikhulu ngosuku bese ubuza ukuthi "Uphi?", Gwema imibuzo ephathelene nekusasa lakho elihlangene, ungadli umuntu wakho nge-sms noma nge-imeyili. Indlela engcono kakhulu ukukhipha igama lomshado kusuka engxoxweni yakho. Amadoda ayinalo uthando olujulile lokunikeza imibiko noma ukuhlala ngokuhlelekile, kodwa bathanda ithuba futhi bazenzele.
5. Owesifazane ohloniphekile u-sexy ngokulinganisela.
Noma yikuphi umuntu ofuna owesifazane abe ngowesilisa, kodwa amadoda amaningi acabanga ukuthi ezimweni zokuqala zokuthandana owesifazane kufanele agweme ngokucacile ukubonisa imizwa yothando kanye nokukhuluma ngokocansi. Kodwa ngezigaba ezingathí sina, ubungane obuseduze buzobe bufanelekile.
6. Ngezocansi, owesifazane ukhetha isikhathi esifanele.
Kuyiqiniso ukuthi asihlali eNkathini Ephakathi, futhi nanamuhla akekho olangazelela ubusuku bomshado ukuba abe nobulili okokuqala, kodwa ukuhlangana okuqala okubalulekile kubaluleke kakhulu kulo mbhangqwana. Naphezu kwalokhu, abesifazane abaningi abaqapheli ukubaluleka kwalokhu futhi abaqondi ukuthi ukushintsha okusheshayo kwezocansi kungathonya kanjani ukuthuthukiswa kobudlelwane. Uma owesifazane ejabule, i-hormone oxytocin ikhiqizwa, okusho ngokwezifundo ezithile, kwenza owesifazane akhangele nakakhulu emehlweni omuntu. Kukhona ingozi yokuthi ubuhlobo ngeke bube khona ngaphandle kokuphila kobulili, uma ngabe omaziyo omusha esheshayo waba yisihlobo esiseduze.
7. Owesifazane ngeke akwazi ukubekezelela izidakamizwa zesilisa.
Owesifazane omuhle ngeke akwazi ukuphazamisa ukuziphatha okungafanelekile engxenyeni yalo muntu. Ubulili obuqinile bukhuthaza inhlonipho kulabo besifazane abangazivumeli ukuba nezintandokazi "ohlangothini", ngoba bayazi ukuthi imiphumela yomshado ingaba yini ngenxa yalokhu. Uma umuntu ebona ukuthi ukwehluleka okunjalo kuyiphutha elingenakuthethelelwa, uzokubonga nakakhulu. Abesifazane abangekho ubuhlobo, ngaphandle kobungane, nabesilisa abashadile noma abashadile, bahlonishwa kakhulu yingxenye enamandla yabantu.
8. Owesifazane kufanele alalele indoda.
Amadoda afuna ukunakekelwa owesifazane! Indoda iphupha kowesifazane omnika izibonakaliso ezincane zokunakekelwa, futhi bamtshela ukuthi ungowesifazane othandekayo. Owesifazane ohloniphekile ukhumbula njalo izidakamizwa zomuntu, kungakhathaliseki ukuthi ungumculo, ukudla okuthandayo, amaswidi noma okunye okunye, njalo unakekela izidingo zakhe nezidingo zakhe.
9. Uyakwazi ukukhetha indoda yangempela.
Owesifazane oqotho wangempela uyazi ukuthi angakhetha kanjani umuntu onokwethenjelwa, ofanelekayo oqotho futhi othembekile naye. Kufanele ube nokufana okuningi: ukubukwa empilweni, izinga lemasiko kanye nemfundo, futhi okubaluleke nakakhulu isimo sengqondo ngokuqondene nemali (isizathu esivamile sokuthi kungani ukushayisana komshado). Ngisho naphezu kwenkolelo yokuthi abaphikisayo bayakhangwa, cabanga kaningi ngaphambi kokuba uhlobanise impilo yakho nomuntu ochitha imali.
10. Owesifazane ohloniphekile uyazi ukuthi kusho ukuthini ngempela uthando.
Owesifazane angakwazi kanjani ukuthi uyakuthanda ngempela? Ngezinye izikhathi, kungase kufike isikhathi lapho owesifazane ebabaza: "Nansi lokho!", Futhi ukuyixosha esixukwini samanye amadoda. Kodwa uthando lwangempela lungumzwelo ojabulisayo wokuthi injabulo yomuntu othandekayo ibalulekile njengeyakho.
Yiqiniso, lokhu akusikho konke izinto amadoda azifunayo kowesifazane. Wonke umuntu unomqondo wakhe womngane ofanelekayo wokuphila. Ukuhambisana nawo wonke amaphuzu angenhla akuqinisekisi ukuthi lo muntu uzokukhetha. Kumele unqume futhi usebenzise izifiso zakho zowesifazane ongcono, bese uthola impilo ejabulisayo emshadweni.
Amaqiniso ambalwa mayelana nokushaya indlwabu kwesilisa
Kuthiwani uma lo muntu engafuni ubuhlobo obungathí sina?
Kungani ukubonakala komuntu kubalulekile?
Iholide lomndeni olwandle olunomntwana
Ukuhleka kwekhasika: I-Tom Ford Runway Makeup Collection Spring / Summer 2016
Waffles ezenziwe ngokwenziwa
Iqoqo lasehlobo lezesekeli zikaLouis Vuitton Tropical Journey 2016
Kusukela kubani abesifazane abangayi amadoda
Ikhekhe ne-cherry omisiwe nezomisiwe